IPerch, entliziyweni yeKirksville, iibhedi ezi-2/2 zokuhlambela
Eli gumbi lokulala lithandekayo li-2, igumbi lokuhlambela eli-2 libekwe nje kwiibhloko ukusuka e-ATSU, eTruman State kunye nesikwere sedolophu yaseKirksville.
Kukho ibhedi enkulu kwigumbi elinye lokulala nokumkanikazi kwelinye. (umatrasi womoya uyafumaneka xa uceliwe). Ikhitshi ixhotyiswe ngokupheleleyo kwaye ilungele ukuhamba. Kukho kwakhona iwasha / isomisi kwiyunithi.
Indawo yokupaka ngaphandle kwesitalato ekhoyo kwisakhiwo.
Le yindlu yomgangatho ophezulu kwisakhiwo esizolileyo.
Ukufikeleleka kwezinyuko kuphela.
Akutshaywa, akukho zilwanyana zasekhaya, akukho maqela.
Le ndlu inegumbi elingaphambili elivulekileyo, indawo yokutyela / ikhitshi. Igumbi lokumkanikazi, indawo yokuhlamba impahla, ibhafu ingasemva kwendlu. Igumbi lenkosi, igumbi lokuhlambela eliphambili kunye negumbi lokufundela liphambi kwendlu. Kukho indawo eninzi ye-closet kwaye igumbi ngalinye linendawo yokunxiba eyakhelweyo.
Kukwakho nocango olungasemva olunezitephusi ukuya kwicala elingasentla lokupaka ngaphandle kwekhitshi.
Le yidolophu yasekholejini eneYunivesithi yaseTruman State kunye ne-ATSU kumgama wokuhamba. Isikwere sedolophu saseKirksville sikwayindawo nje embalwa emantla. Isitalato saseFranklin sisitalato esivulekileyo, esenza kube lula ukuphonononga indawo yendawo.
Ungafowuna okanye uthumele umyalezo nangaliphi na ixesha. Ngokuqhelekileyo ndifikeleleka lula. Ukuba unenkxalabo ethile, ndiza kuthumela umntu oza kukunceda ngokukhawuleza.